ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Trey Pennington | Martech Zone
Trey Pennington ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 4, 2011 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 26, 2011 Douglas Karr
ဒီမနက်မှာထိတ်လန့်စရာကောင်းသောသတင်းများ၊ တနင်္သာရီ။ မတ်လမှာ Trey နဲ့ Jay ကသူတို့ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတက်ဖို့ပြောတယ် စီးပွားရေးအတွက်ဖွင့်လှစ်။ ဒါဟာဘလော့ဂ်ရဲ့လူကြိုက်များမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ကောင်းတဲ့စကားပြောဆိုမှုဖြစ်ပြီး Trey ကပြပွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော့်ကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့တယ်။ သူ၏ Facebook နံရံကိုသင်ဖတ်ပါကသူ့နောက်လိုက်များနှင့်သူငယ်ချင်းများထားခဲ့သည့်မက်ဆေ့ခ်ျများ၌တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုသည်အများအားဖြင့်တွေ့ရသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ သို့သော်သူသည်မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့သည်။ ဒါကအတော်လေးထိတ်လန့်စေသည်။ Trey ၏ကွန်ယက်အချို့သည်လူတို့၏အသက်ကိုယူရန်အတွေးများရှိပါကအကူအညီတောင်းရန်လူများကိုတိုက်တွန်းသည်။ ငါလည်းဒါကိုအားပေးချင်ပါတယ်
ငါ့အတွက်နောက်ကွယ်စိုးရိမ်စရာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ Trey ၏အွန်လိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည်မကြာခဏခရီးထွက်ခဲ့ပြီးသူ၏ကွန်ယက်နှင့်လုံး ၀ စေ့စပ်ခဲ့သည်။ သူ၏ twitter စာမျက်နှာသည်အခြားသူများကိုအားပေးရန်၊ ကျေးဇူးတင်ရန်နှင့်ရာထူးတိုးရန်မရေမတွက်နိုင်သောတွစ်တာများဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့စိုးရိမ်စရာကဒီမယုံနိုင်လောက်အောင်လူများ၏ကွန်ယက်ဖြစ်သည် မလုံလောက်ဘူး။ ငါတို့ကဲ့သို့ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အော့ဖ်လိုင်းစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အမြဲမကိုက်ညီသည့်အွန်လိုင်း personas များကိုတီထွင်ဆဲဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးအခုအချိန်မှာစို့။ အချို့လူများက၎င်းကိုလျစ်လျူရှုကာဆက်လက်တွန်းအားပေးနေသည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်ပြင်းထန်သောစိုးရိမ်မှုများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏အေဂျင်စီသည်အောင်မြင်မှုဆက်လက်ရရှိနေသောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိန်ခေါ်မှုကိုခံနေရဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေအတွက် ၁၀၀% ထည့်မယ့်အစားသူတို့ကိုယ်သူတို့ ၁၅၀% ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ တစ်ခါတလေမလုံလောက်ဘူး။ လိုအပ်ချက်တွေကဆက်ပြီးတိုးလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ပိုကြိုးစားပြီးဖောက်သည်တွေတိုးတက်နေချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ငွေသားစီးဆင်းမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမယ့်ပြissuesနာတွေရှိနေတယ်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သူတွေကိုအမြဲတမ်းအကျိုးသက်ရောက်စေမယ့်အရာပဲ။
သို့ အောင်မြင် ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်, သင်ကြီးထွားဖို့ရှိသည်။ ကြီးထွားရန်သင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မပြတ်မတီးမြှင့်တင်ရန်နှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရမည်။ သင်၏ကွန်ယက်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှမျှော်လင့်ချက်များလည်းတိုးတက်လာသည်။ သင်ပြောသည့်မိန့်ခွန်းတိုင်းသည်ပြီးခဲ့သည့်ထက်ပိုကောင်းရန်လိုအပ်သည်။ သင်ရေးသောစာအုပ်တိုင်းသည်အရောင်းရဆုံးဖြစ်သည်။ တိုင်းဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုဗိုင်းရပ်စ်သုတ်သင်ဖို့ရှိပါတယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်ကိုဆက်သွယ်သည့်အခါတိုင်းသင့်ကိုသူတို့နှင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်သင့်သည်။ အမှန်မှာ၊ ဤလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအပေါ်တောင်းဆိုမှုများသည်အလွန်ကြီးမားလှသည်။
ငါဆိုရှယ်မီဒီယာလုပ်ငန်းခွင်၏ခေါင်းဆောင်အချို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို၍ ပိုမိုဖတ်ရှုနေသည်။ ၀ န်ထမ်းများကိုသူတို့နှင့်သူတို့၏ကွန်ယက်အကြားထားရှိရန်နှင့်မရရှိနိုင်သည့်သတိပေးချက်များနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုတုန့်ပြန်ရန်အကြောင်းများသည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများကကျွန်ုပ်အားဖုန်းဆက်။ မရ၊ နားလည်မှုနည်းသောလူများသည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည့်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုထားခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ထံတွစ်တာ၊ Facebook တွင်ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တုန့်ပြန်မှုမရှိဟုလုံးလုံးလျားလျား pissed လုပ်ပါ။
ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်ဖုန်းကိုတုန်ခါစွာထားခဲ့ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်တိုင်းဖုန်းအသစ်တစ်ခုဖြင့်မရပ်မနားတုန်ခါခဲ့သည်။ ငါနောက်ဆုံးတော့ (ငါမကြာခဏပြုသကဲ့သို့) ကပိတ်ထား စနေ၊ တနင်္ဂနွေတိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေတုန်း၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မိသားစုတွေအတွက်အချိန်တွေကုန်သွားတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစျေးကွက်တင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက်မှတောင်းဆိုမှုအားလုံးကိုတုန့်ပြန်ခြင်းတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းမနေနိုင်ပါ။ ငါအချိန်လိုအပ်တဲ့အခါ, ငါ့ကွန်ယက်နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးယိုယွင်း။
ငါမညည်းဘူး ဒီဟာကကျွန်တော်မွေးစားပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကမ္ဘာပါ ကိုယ်ကြိုက်တယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှပညာရှင်များမှအကျိုးကျေးဇူးခံစားရသူများကိုတစ်မိနစ်ယူပြီးကျေးဇူးတင်ပါရစေ။ ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နေသည်ကိုနားလည်ရန်တောင်းခံပါသည်။
Trey Pennington ရှိခဲ့ပါတယ် လေးဆ ငါရှိသည်အောက်ပါ။ ငါသူ့ကိုအပေါ်တောင်းဆိုချက်များကိုစိတ်ကူးနိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရေဒီယိုပြသမှုမှ Trey ရရှိရန်မျှော်လင့်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုသူ့့ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်းသူသည်ကျွန်ုပ်အားသူ၏ကွန်ယက်နှင့်ဆက်သွယ်ခွင့်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါကသူလိုလူပဲ။ ထိုအခါအွန်လိုင်းအတူတကွငါတို့အချိန်များအတွက်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
PunchTab - မည်သည့်ဆိုက်အတွက်မဆိုလူမှုဆုလာဘ်များနှင့်သစ္စာရှိမှု
4:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 10, 00 မှာ
အေး။ သူက Tweets ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နာရီလောက်ကတည်းကတုံ့ပြန်နေတယ်။ အမှန်မှာတန်ဖိုးများကိုရှုထောင့်တွင်ထားရှိပြီးလိုအပ်ပါကအကူအညီတောင်းရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
4:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 10, 08 မှာ
ကောင်းပြီ, spragued ကဆိုသည်။
4:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 10, 25 မှာ
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတည်းကငါတို့အသင်းတော်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေဖို့အလွန်ချစ်ရတဲ့သူငယ်ချင်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ ဒါကတုန်လှုပ်သွားပြီးခင်ဗျားရာထူးမှာမင်းမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေအတူတူပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ကျွန်မတို့ဝမ်းနည်းပူဆွေးတဲ့အကြံပေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ရတယ်။ ငါဒီဥပမာမှာအများကြီးသင်ယူခဲ့တယ်။ Trey Pennington ၏သေခြင်းတရားကိုကြားရခြင်းသည်နာကျင်သောခံစားချက်နှင့်မေးခွန်းအချို့ကိုပြန်လည်တည့်မတ်ပေးသည်။ ယခုငါသည်ယခင်အတိတ်ကာလကထက် ပို၍ ငြိမ်းချမ်းနေပြီဖြစ်သည်။
သင်ဖိအားနှင့်တောင်းဆိုမှုများနှင့်ပတ်သက်။ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသောအချက်သည်အမှန်ပင်ကောင်းသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ လူ့စိတ်ဝိညာဉ်သည်အနားယူရန်လိုအပ်ပြီးနာကျင်မှုများစွာကိုမခံရပ်နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏အတွေးများနှင့် ၀ မ်းနည်းမှုသည် Trey ၏မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများထံသွားသည်။ သူ၏အမွေအနှစ်သည်ကောင်းချီးတစ်ခုအတွက်အမြဲဖြစ်ပါစေ၊ ဖြစ်နိုင်လျှင်မကြာမီနှစ်သိမ့်မှုရရှိပါစေ။
စက်တင်ဘာ 5, 2011 မှာ 4: 30 AM
လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကဤကဲ့သို့သောအခြားမိတ်ဆွေတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အဲဒီအချိန်ကကျွန်တော့်ကိုအဲဒီအတွေးတွေနဲ့ငါ့ရဲ့အပြုအမူအပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားစေတယ်။ ငါ Trey ရဲ့အမွေဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်လှုံ့ဆော်မှုရင်းမြစ်အဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်သေချာပါတယ် ဒီလောက်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာသူ့မိသားစုနဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။
4:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 11, 28 မှာ
ဒီစီနံနက်မှာစီဒီလူမှုမီဒီယာအသိုင်းအ ၀ ိုင်းကနေတွစ်တာတွေမှတဆင့်ကျွန်မ Trey အကြောင်းလေ့လာခဲ့တယ်။ အရမ်းဝမ်းနည်းတယ် သူသေဆုံးတာကဒီနေရာမှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်းနာကျင်မှုဝေဒနာရှင်အများစုကသူကသူတစ်ပါးကိုအမြဲအားပေးအားမြှောက်ပြုနေမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနေအာရုံလွဲသွားလေ့ရှိတယ်။ အခြားသူများကိုအကူအညီတောင်းရန်တောင်းခံခြင်းထက် ပို၍ လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်ခံစားရန် (သို့) ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံပေါ်ရန်ပင်ကောင်းသော (နှင့်အမှန်တကယ်အဓိပ္ပါယ်ရှိသော!) နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေသောယဉ်ကျေးမှုတွင်နေထိုင်ကြပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အချိန်ကာလအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထွက်ရန်အချိန်သို့မဟုတ်ခွန်အားကိုအမြဲတမ်းခွင့်မပြုခဲ့ပါ။
သူ့သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေ၊ သူ့အတွက်ငါခံစားရတယ်။ လူတစ် ဦး သည်မိမိဘဝကိုအဆုံးသတ်ရန်ရွေးချယ်ရန်စိတ်ကူး။ မရသည့်နာကျင်မှုဝေဒနာကိုခံစားရမည်။ အလားတူအခြေအနေမျိုးတွင်ရှိသောအခြားသူများသည်တက်လှမ်းရန်လှုံ့ဆော်ခံရမည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
စက်တင်ဘာ 5, 2011 မှာ 4: 34 AM
စိတ်ကျရောဂါထိုကဲ့သို့သောလိမ်လည်မှုလူသတ်သမား Laurie ဖြစ်ပါတယ်။ အကူအညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်အရမ်းမှန်ပါတယ် တကယ်တော့ငါပြောတာကတစ်ခါတစ်ရံမှာသူတစ်ပါးကိုကူညီပေးခြင်းကအခြားသူတွေခံစားရတဲ့နာကြည်းမှုကိုဘေးဖယ်ထားပေးတယ်။ မည်သူမဆိုဤမှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှုရုန်းကန်နေလျှင်၊ သူတို့အကူအညီတောင်းမည်ဟုကျွန်ုပ်သေချာပေါက်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဘာမှသိပ်မျှော်လင့်စရာမရှိတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရနိုင်ပြီးနောက်တဖန်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းမှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
စက်တင်ဘာ 5, 2011 မှာ 1: 47 AM
ဂရိတ် post ကိုဒေါက်ဂလပ်။ ငါ့အတွက်စိုးရိမ်စရာအချက် ၂ ချက်ရှိတယ်။
၁။“ ငါတို့ကဲ့သို့ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အော့ဖ်လိုင်းစိန်ခေါ်မှုများနှင့်မကိုက်ညီသောအွန်လိုင်း personas များကိုတီထွင်ဆဲဖြစ်သည်။ ” <= စွဲချက်တင်မှုအနေဖြင့်မှန်ကန်ပြီးအပြစ်ရှိသည်။ အမြီးအမောက်ကဒီဟာကိုငါလုပ်ပေမဲ့လည်းတခြားသူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမေ့လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်သင် Facebook ကိုကြည့်ပြီးသူတို့သူငယ်ချင်းတွေဆီက status updates တွေကိုသူတို့တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့အောင်မြင်မှုအားလုံး၊ ပျော်စရာတွေအများကြီးတွေ့လိုက်ရတော့ကျွန်မကိုပိုပြီးစိတ်ဓာတ်ကျပြီးပျင်းစရာကောင်းတယ်။
၂။“ သူငယ်ချင်းတွေကငါ့ကိုဖုန်းဆက်လို့မရဘူး၊ ငါ့ကိုမဖမ်းနိုင်ဘူးဆိုတာရယ်။ <= ငါကိုယ်တိုင်ဒီဟာကိုလက်ခံလိုက်ပြီ သင်၏ကွန်ယက်မှမေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကိုတုန့်ပြန်သည့်အခါ၌ပင်။ အမှန်တရားမှာအလုပ်ချိန်အတွင်းသူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောခြင်းနှင့်မေးမြန်းချက်အချို့ကိုတုံ့ပြန်ခြင်းသည် ၀ င်ငွေရစေသောလုပ်ငန်းမဟုတ်ပါ။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့အချိန်ကိုသေချာစွာဂရုစိုက်ရမယ်၊ သင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုချင်တဲ့မေးမြန်းချက်များနှင့်မလိုအပ်သောမေးမြန်းချက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်နှင့်ခွဲခြားရန်တံခါးစောင့်များကိုငှားရမ်းရပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အဝင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကန့်သတ်လိုက်ပြီးပြင်းထန်ပုံရသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကိုအမြင့်ဆုံးနှင့်ဘေကွန်ကိုအိမ်သို့ယူဆောင်လာရန်အတွက် solopreneur တစ်ခုအနေဖြင့်ပြုလုပ်ရမည့်အရာဖြစ်သည်။
သော်လည်း Trey Pennington အကြောင်းကြားရန်ကျိန်းသေစိတ်မကောင်းပါဘူး။ သူ၏အလုပ်နှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိခဲ့ပါ။ ငါဖတ်နေသည့်တွစ်တာအားလုံးမှသူသည်လူမှုမီဒီယာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုသောအလွန်ကြီးကျယ်သောကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပုံရသည်။
စက်တင်ဘာ 5, 2011 မှာ 4: 27 AM
သူများသည်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမြတ်အချက်များ, Stephanie ဖြစ်ကြသည်။ ဒီကွန်ရက်တွေဟာတစ်ခါတစ်ရံမှာဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ခဲ့တယ်။ you ကျွန်ုပ် ၀ မ်းမြောက်ကြောင်း ၀ မ်းသာပါသည်။ ငါ့ကိုခေါ်သွားဖို့သင်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်တက်ရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်!
5:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 2, 35 မှာ
ငါ့ကိုတကယ်စကားပြောသောအလွန်နှလုံး - ခံစားရတယ်နှင့်အသည်းအသန် post ကို။ ကျွန်ုပ်၏ယခင်အလုပ်ရှင် (အိမ်ဆောက်လုပ်ရေး) နှင့်အေဂျင်စီအမှုဆောင်အရာရှိဟောင်း၏ဒေဝါလီခံပြီးသောသူမအနေဖြင့်သူမကိုယ်ပိုင်အေဂျင်စီကိုစတင်ခဲ့သူတစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်သည်အလားတူဖိအားများကိုကျွန်ုပ်သိသည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြိမ်များစွာနပန်းလုံးခဲ့ပြီး၊ နေ့စဉ် ၁၃ နာရီထက်နည်းသောအလုပ်လုပ်ရန်၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတောင်းဆိုသော ၅၀“ အခမဲ့” ပစ္စည်းကိုကောက်ခံရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုတိုးပွားစေရန်။ ကျနော်တို့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုမှတဆင့်ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်ဖောက်သည်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်နေဆဲ, တောင်းဆိုချက်များကိုသူတို့ကိုသင်ဖော်ပြထားသည်အတိုင်းအတိအကျဖြစ်ကြသည်။
ဒေါက်ဂလပ်သူတ ဦး တည်းဟာကြောက်မက်ဘွယ်မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်အား guest ည့်သည်တော်နှစ် ဦး အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ သူသည်အလွန်ကြင်နာပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြားရန်အတွက်အော်နေသည်ဟုခံစားမိသည်။
ရှေး ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းပုဂ္ဂိုလ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အော့ဖ်လိုင်းလိုင်းများနှင့်မကိုက်ညီဟုပြောနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သဘောမတူပါ။ Trey လည်းလူတစ် ဦး အတွက်လူတစ် ဦး ပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်သူလူထု / ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘ ၀ တိုင်းကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်တင်ရန်ဆန္ဒမရှိကြပါ။ ငါတို့ဘာကြောင့်ဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှမလုပ်သင့်ဘူး။
ငါဒီကနေယူဖို့ရွေးချယ်တာက "Trey နဲ့ငါ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့်ငါနဲ့တခြားသူနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲ?"
ငါ cheerleader ဖြစ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ငါထုတ်ဖော်ဖို့လိုအပ်ကြိမ်များအတွက်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကွန်ယက်ကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဆုတောင်းချက်များသည် Trey ၏ကလေးများအား ၂၅ နှစ်ကြာလက်ထပ်ပြီးနောက်ကွာရှင်းလိုက်သောအခါ၎င်းသည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်ကိုသိသည်နှင့်အမျှကွာရှင်းမှုကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းသည်မည်မျှနာကျင်မည်ကိုသာစိတ်ကူးနိုင်သည်။
5:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 2, 50 မှာ
ကြင်နာသောစကား၊ မိက္ခာလအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလူများမသိစေလိုကြောင်းသဘောတူသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ သူတို့နောက်လိုက်သူများသည်တူညီသောစိန်ခေါ်မှုများစွာ (အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိက) တွင်ရှိကြောင်းကိုနောက်လိုက်များသိရန်လိုအပ်သည်။ စူပါမင်း (သို့) စူပါအမျိုးသမီးပါကဲ့သို့သောအရာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤစုံလင်သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုပြန်လည်ခေါ်ယူရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် 'ပွင့်လင်းမြင်သာမှု' နှင့် ပတ်သက်၍ မိမိကိုယ်ကိုလိမ်ညာနေခြင်းမဟုတ်ပါလော။
Trey ၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုသည်ကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းချက်များတွင် - အလွန်ဆိုးရွားလှသည့်ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ဆိုးဖြစ်သည်။
5:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 7, 35 မှာ
ဂရိတ်အမှတ် Doug! ငါတူညီတဲ့ရုန်းကန်မှုများများစွာရှိသည်။ ငါအွန်လိုင်းပိုလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့အမြဲပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာ client client အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတာနဲ့ပဲတော်တော်အလုပ်များနေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားကြည့်ပါ၊ မည်သူမျှမပြီးပြည့်စုံပါ။ ထို့ကြောင့်တစ်နေရာတည်း၌သင်ထွန်းလင်းတောက်ပသည့်နေရာတွင်သင်သည်အခြားသူများတွင်အားနည်းချက်များရှိနေနိုင်သည်။ Trey ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာအရမ်းဝမ်းနည်းတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်မိသားစုဘဝသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးချဲ့ထားသောကွန်ယက်ထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ အခြေခံအုတ်မြစ်တုန်ခါလာသောအခါ၎င်းသည်ပြိုလဲတော့မည်ကဲ့သို့အလွယ်တကူခံစားရနိုင်သည်။ သင့်အတွက်ကောင်းချီးများ! Trey ၏မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျွန်ုပ် ၀ မ်းနည်းမိသည်။